Kuqagulwa izinguquko eziteshini zokusakaza zeSABC - Bayede News
Zibhekwe ngabovu izinguquko ezizokwenziwa yiziteshi ezingaphansi kwenhlangano yokusakaza kuleli iSABC njengoba inyanga ezayo isho ukuqala konyaka omusha kule nhlangano esakazela umphakathi. Phakathi kweziteshi okubhekwe uguquko kuzona kubalwa Ukhozi FM olwehlula zonke iziteshi ezweni nase- Afrika yonkana ngokuba nabalaleli abaningi, uMhlobo Wenene, iRadio 2000 neMetro FM. Izinhlelo okulindeleke ukuthi ziguqulwe ngezasekuseni nezantambama. Ngokuhlela kwezimeneja zeziteshi, kufakwa abasakazi abanekhono lokuheha abalandeli futhi abanogazi. Ngisho nezikhangiso ezidlalwa ezinhlelweni zabo zifaka itshe lemali, okuchaza ukuthi izinhlelo zabo kumele zihlale ziseqophelweni eliphezulu. ISABC isivamisile ukutheza eziteshini ezizimele njengeGagasi FM, iHeart FM, iJacaranda neziteshi zemiphakathi ngenhloso yokuqinisa amabhawodi. Nakulokhu kulindeleke kwenzeke esifanayo.
KuMetro FM UThando Thabethe obeku-5FM eshayela uhlelo obelunabalandeli abaningi, iThe Thabooty Drive, phakathi nesonto kusukela ngehora lesithathu kuya kwelesithupha ntambama, ukhonjwa kuMetro FM. Kuthiwa izikhulu azeneme ngomsebenzi kaDJ Sphe and Naves abalandwa kuGagasi FM ngenhloso yokwenyusa isibalo nokuheha intsha kuMetro FM. Laba basakazi abebeshayela uhlelo lwantamabana kuthiwa bazotholelwa indawo ohlelweni lwangempelasonto. Kuzo ezeMetro FM, alaziwa ikusasa likaSomizi Mhlongo njengoba kuvela ukuthi uzosuswa ohlelweni iThe Bridge olungena emini alenza ngokuhlanganyela noDineo Ranaka noLerato Kganyago.
KuSAFM ISAFM kubukeka ibambe ufishi omkhulu ngoCathy Mohlahlana ozakhele igama esiteshini sethelevishini sezindaba i-eNCA ngaphambi kokuhlwithwa iNewzRoom Afrika okuyisiteshi esisungulwe ngemuva kokuvalwa kwe-ANN7. UMohlahlana useqalile ukuzwakala ohlelweni lukaBongi Gwala, iThe Talking Point, eba phakathi nesonto kusukela ngehora lesi-9 kuya kweleshumi nambili emini.
OwakwaMandlakazi wahola ibutho elalekelela uSuthu linqobe iZigqoza eMpini yaseNdodakusuka
KuRadio 2000 Ngokwemithombo iRadio 2000 yiyo ezokwenza izinguquko eziningana. Kuqagulwa ukuthi uJustice “Ice- Man” Ramohlola abuyiselwe ohlelweni lwasekuseni olungena ngelesi-6 njengoba esesulile uMajota “Phat Joe” Khambule obelushayela. UKhambule, odume ngokuba nomlomo omanzi nomqhatha neningi, ubeshayela lolu hlelo ngokubambisana noNonala Tose bese kuthi uLonwabo Nkohla abike ngezemidlalo. Kakade kwaba nesikhulu isililo cishe ezweni lonke ngesikhathi iMeneja yalesi siteshi, uPuleng Thulo, ikhipha u-Ice- Man imfuhlela ohlelweni lwakusihlwa, i-Ice Therapy, engena ngoMsombuluko kuya kuLwesine kusukela ligamenxe elesikhombisa kulamule eleshumi ihora. Omunye umsakazi igama lakhe eselimataniswa neRadio 2000 uMapaseka Mokwele obesehlale isikhathi eside kuKaya FM. Phambilini wayengumfundi wezindaba kuMetro FM ngaphambi kokugxila emabhizinisini nomyeni wakhe ongumsakazi weKaya FM, uThabo Mokwele. Umakadebona uSydney Baloyi okuMunghana Lonene FM, ukhonjwa kuRadio 2000 lapho kuthiwa uzokwenza izinhlelo zangoLwesihlanu nangoMgqibelo ngemuva kohlelo lwezemidlalo kusihlwa. Okhulumela iSABC uMmoni Seapolelo uthe okwamanje akukho abangakuphawula ngoba azikaqedwa izingxoxo nabathintekayo.